Saturday July 13, 2019 - 20:38:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markale kumanaan katirsan ciidamada xukuumadda imaaraatka carabta ayaa isaga baxay Yemen xilli maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan gudaha Sacuudiga.
Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in ciidamada imaaraatka ay baneeyeen illaa laba dekadood oo kuyaal Yemen kuwaas oo muddo sanada ah ay gacanta ku hayeen ciidamada taxaalufka carabta.
Goob joogayaal iyo saraakiil katirsan xukuumadda Cabdi Rabih Haadi Mansuur ayaa wakaaladaha wararka u xaqiijiyay in ciidamo Sacuudiyaan ah ay la wareegeen gacan ku heynta dekadda magaalada Almakha ee kuteedsan badda cas islamarkaana kaabiga ku haysa marin biyoodka muhiimka ah ee Baabul mandab.
Sidoo kale ciidamada imaaraatka ayaa baneeyay magaalada Alkhookha iyo dekadeeda kadibna waxaa qabsaday ciidamo Sacuudiyaan ah, ciidamada imaaraatka oo wata gaadiid gaashaaman iyo kuwa xamuulka ayaa uboqoolay dhanka magaalada Cadan oo ah caasimadda Koonfurta Yemen waxaana lafilayaa in halkaas loogasii daabulo maraakiib dagaal.
Wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa ilo wareedyo ayaa sheegtay in sacuudigu ay ciidamo farabadan udireen wadanka Yemen si ay ubuuxiyaan booska ay baneeyeen ciidamada imaaraatka.
Mas'uuliyiin Sacuudiyaan ah ayaa cara ka muujiyay go'aanka halka dhinac ah ee Abuu Dubai ay qaadatay kaas oo umuuqda in ay ku yaranayso awoodeeda Yemen, ilo wareedyo Sacuudiyaan ah waxay muujiyeen in aysan waxba kala socan qorshaha imaaraatka waxaana socda baa laleeyahay dadaallo lagu doonayo in imaaraadka looga dhaadhiciyo in uusan dhimin ciidamadiisa Yemen ku sugan.
Shabakad taageerta dowladda imaaraatka ayaa barteeda internetka ku faafisay in gobollada ay ciidamadu ka bexeen ay ku diyaarsanyihiin kumanaan maleeshiyad ah oo imaaraatku tababaray kuwaas oo cadadkooda lagu sheegay 95 kun kuna qalabaysan hub culus.
Maleeshiyaadka imaaraatku tababaray oo sumcad xumo ku dhax leh shacabka Yemen ayaa larumeysanyahay in aysan ku filnayn gacan ku heynta magaalooyinka dhaca koonfurta iyo waqooyiga wadankaasi.
Mas'uul imaaraati ah ayaa horay u sheegay in qorshaha ka bixitaankooda Yemen uu yahay mid ay ku bedelayaan hanaankii dagaalka una bedelayaan mid nabadeed sida uu uhadalka udhigay.
waxaa jira wadahadallo hoose oo imaaraatka carabta uu lafurayo Iiraan waxaana shuuradaha iiraan ay ugudbisay imaaraatka kamid ah in uu yareeyo awooddiisa Yemen arrinkaas oo kasoo ifbaxay dhanka Yemen.
Wargeyska New York Times oo soo xiganaya ilo wareedyo mas'uul ah ayaa daabacay in yareynta ciidamada imaaraatka Yemen uu xigi doono ka bixtaan dhameystiran taas oo sababaysa in Riyaad iyo Abu Dubai ay dhaxdooda iskhilaafaan.